MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardRGO47 Promotion MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
rgo47 Online Shopping သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများကို ရောင်းချပေးပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော Online Shopping တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခု MPT Club Diamond နဲ့ Platinum customer များအတွက် “Single’s Day Promotion” ရောက်လာပါြပီ။
MPT Club Diamond & Platinum သုံးစွဲသူများအတွက် rgo47 အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ပရိုမိုကုဒ် (MPTWDK1111) ကို အသုံးပြု၍ ၁၁,၁၁၁ MMK လျှော့စျေးနှင့် ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ကို ၂၀၀၀၀ကျပ်နှင့် အထက်အထက်ဝယ်ယူသူတိုင်း ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အပိုဆုအနေဖြင့် အနည်းဆုံး ၁၁,၁၁၁ ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူပြီး MPT Money ဖြင့်ငွေပေးချေပါ MPT Point ၁၁,၁၁၁ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ယခုအစီအစဉ်သည် SMS ရရှိသော MPT Club Diamond နှင့် Platinum အသုံးပြုသူများ အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဤပိုမိုးရှင်းအား MPT Club Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
၃။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ (၁၅) ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်ပါသည်။
၄။ Promo code အား အသုံးပြုသူ (၁၁၁၁၁) အထိသာအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁။ rgo47 ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကို မည်သူတွေက ခံစားခွင့်ရနိုင်မလဲ?
ယခုအစီအစဉ်သည် SMS ရရှိသော MPT Club Diamond နှင့် Platinum များပါ၀င်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ချက်ရှိ ပါသည်။
Promo code အသုံးပြုမှု သည် သက်မှတ်ထားသော ကန့်သတ် ပမာဏ ကို ရောက်ရှိသွားသော အခါ အသုံးပြု၍ ရတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ချွင်းချက် အနေဖြင့် Single’s Day Promotion အတွက် SMS လက်ခံရရှိသူ များဖြစ်သော MPT Club Diamond နှင့် Platinum member များသာ အကြုံး၀င်မည်ဖြစ်ပြီး ထို customer များအနေဖြင့်လည်း rgo47 application မှ မှာယူရာတွင် MPT SIM Card (MPT Club Diamond/Platinum level ရရှိထားသော SIM Card) ဖြင့်သာ rgo47 application အား register လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂။ ယခု rogo47 ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေက ဘာတွေလဲ?
Diamond level နှင့် Platinum level customer များအတွက် 11,111 kyats discount coupon များခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နာမည်ကြီး တံဆိပ် အမျိုး (၂၀) ကိုလည်း အများဆုံး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ discount များရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေပေးချေရာတွင် MPT Mobile Money ဖြင့်ပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက 1111 points ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါမည် (အနည်းဆုံး 11111 ကျပ်နှင့် အထက် ၀ယ်ယူသူများသာ)။ ဤပရိုမိုးရှင်းအား MPT Club Diamond နှင့် Platinum အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလျှင်တစ်ကြိမ်သာခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက် အကန့်အသတ်အတွင်းသာ အကြုံး၀င်မည်ဖြစ်သည်။
၃။ rgo47 discount coupon ရဲ့ သက်တမ်း မှာမည်မျှနည်း။
SMS Promo code ရရှိပြီးနောက် နို၀င်ဘာလ (၇) ရက်မှ နို၀င်ဘာလ (၁၅) ရက် ကို နောက်ဆုံးထား၍ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ First time purchase အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်ပြီး second time purchase အတွက် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ rgo47 ပရိုမိုးရှင်းကို ဘယ်လို ရရှိ နိုင်မလဲ?
Rgo47 application တွင် Diamond/Platinum level ကိုရရှိထားသည့် MPT SIM ဖြင့်သာ register ၀င်ရမည်ဖြစ်သည်။
Rgo47 ၌ သင်၏၀ယ်ယူမှုသည် အနည်းဆုံး နှစ်သောင်းကျပ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ငွေပေးချေရာတွင် MPT Mobile Money ဖြင့်ပေးချေမှုပြုလုပ်ပါက 1111 points ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါမည် (အနည်းဆုံး 11111 ကျပ်နှင့် အထက် ၀ယ်ယူသူများသာ)
SMS Promo code အား rgo47 application တွင် ရိုက်ထည့်ပြီး promotion ကို ရယူနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း ၊ ကန့်သတ်အရေအတွက် ပြည့်သွားခြင်းများရှိပါက သင့် order အတွက် promotion ခံစားခွင့် မရရှိနိုင်ကြောင်းကို rgo47 မှ SMS ဖြင့်ဖြစ်စေ Phone ခေါ်ဆိုမှုဖြင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ rgo47 ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်ကာလမှာ ဘယ်ထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀၊ နို၀င်ဘာလ (၇) ရက် မှ နို၀င်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ အထိဖြစ်သည်။
၆။ MPT Club ကို မည်သို့ အဖွဲ့ဝင်ရမည်နည်း။
*345# ကို ခေါ်ဆို၍ ကျား (သို့) မ ဟု ရွေးချယ်ပြီး အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်။
(သို့) MPT4U မှ တဆင့်လည်း MPT Club tap ကိုနှိပ်၍ ကျား (သို့) မ ဟု ရွေးချယ်ပြီး အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်။